ဖေဖေတို့အငြိမ့်ကေ နတာကို ဇာတ်စင်နောက်ကနေကြည့်ပြီး တစ်ခဲနက်အားပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားငယ်လေး - .
[ October 20, 2019 ] Egypt International 2019 ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုကြီးကို ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ေ ဆာင်သက်ထားသူဇာ	အားကစား
[ October 20, 2019 ] သူမရဲ့Relationship ဒီမှာပဲ ပြီးသွားပြီလို့ တရားဝင်ေ ကြငြာလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး	Celebrity
[ October 14, 2019 ] ကျုပ်တို့လည်း ကိုယ့်မိဘကိုယ်သီတင်းကျွတ်မှာ ပြန်ကန်တော့ချင်တာပေါ့ဗျာ…။ဒါပေမယ်….	ကြားသိရသမျှ
[ October 13, 2019 ] မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ချန်ပီယံကြီး အောင်လရဲ့ တံတောင် အစွမ်းဖြင့် အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို ထပ်ပြီးကြည့်ခြင်တဲ့ သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်	အားကစား
[ October 13, 2019 ] လပြည့်ညမှာ ဘရန်ဒန်ဗဲရာ ကိုအနိုင်ထိုးပြီးအောင်ပွဲခံလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်	ကြားသိရသမျှ
HomeCelebrityဖေဖေတို့အငြိမ့်ကေ နတာကို ဇာတ်စင်နောက်ကနေကြည့်ပြီး တစ်ခဲနက်အားပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားငယ်လေး
ဖေဖေတို့အငြိမ့်ကေ နတာကို ဇာတ်စင်နောက်ကနေကြည့်ပြီး တစ်ခဲနက်အားပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားငယ်လေး
October 6, 2019 admin Celebrity 0
ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်လာတာ ဆယ်စုနှစ်မကတောင်ရှိနေပါပြီနော်။ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်ခြင်းတွေကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ နုပျိုမှုကတော့ ငယ်ရုပ်လေးမပျောက်ဘဲ ခန့်ညားချောမောနေဆဲဖြစ်တာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း လက်ခံကြမှာပါနော်။
အခုဆိုရင် မင်းမော်ကွန်းက နေတိုး ကျော်ကျော်ဗိုလ် ထွန်းထွန်း ရဲလေး မိုးယုစံ ဖူးစုံ မေကဗျာ မိုးပြည့်တို့နဲ့အတူ နှင်းဆီလှေအငြိမ့်ကို ရန်ကုန် မန္တလေးနှစ်နေရာမှာ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းတို့ နှင်းဆီလှေအငြိမ့်ကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာအရမ်းရေပန်းစားပြီးအောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းတို့ အဖွဲ့သားတွေကလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်နှစ်ပြီးတော့ကို ကြိုးစားထားကြတာပါနော်။
မနေ့ညကဆိုရင်တော့ နှင်းဆီလှေအငြိမ့်ကို မန္တလေးမှာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ကပြဖျော်ဖြေပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားငယ်လေး ဧကဘုန်းမြတ်ကတော့ အနုပညာသွေးအပြည့်ပါတာကြောင့် ဖေဖေမင်းမော်ကွန်းတို့ဖျော်ဖြေနေတာလေးကို ကလန့်ကာနောက်ကွယ်မှာ ထိုင်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားစွာ ‌အားပေးကြည့်ရှု့နေတဲ့ပုံရိပ်လေးကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယူနီကုဒ်ဖြင့်ဖတ်ရန် ပရိသတျကွီးရေ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ အကယျဒမီမငျးမျောကှနျးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေိုလုပျဆောငျလာတာ ဆယျစုနှဈမကတောငျရှိနပေါပွီနျော။ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျခွငျးတှကေို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ မငျးမျောကှနျးရဲ့ နုပြိုမှုကတော့ ငယျရုပျလေးမပြောကျဘဲ ခနျ့ညားခြောမောနဆေဲဖွဈတာကို ပရိသတျကွီးလညျး လကျခံကွမှာပါနျော။
အခုဆိုရငျ မငျးမျောကှနျးက နတေိုး ကြျောကြျောဗိုလျ ထှနျးထှနျး ရဲလေး မိုးယုစံ ဖူးစုံ မကေဗြာ မိုးပွညျ့တို့နဲ့အတူ နှငျးဆီလှအေငွိမျ့ကို ရနျကုနျ မန်တလေးနှဈနရောမှာ ကပွဖြျောဖွခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။မငျးမျောကှနျးတို့ နှငျးဆီလှအေငွိမျ့ကတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာအရမျးရပေနျးစားပွီးအောငျမွငျနတောဖွဈပါတယျ။မငျးမျောကှနျးတို့ အဖှဲ့သားတှကေလညျး ပရိသတျတှအေတှကျ စိတျနှဈပွီးတော့ကို ကွိုးစားထားကွတာပါနျော။
မနညေ့ကဆိုရငျတော့ နှငျးဆီလှအေငွိမျ့ကို မန်တလေးမှာအောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ကပွဖြျောဖွပွေီးသှားပွီဖွဈပါတယျ။မငျးမျောကှနျးရဲ့သားငယျလေး ဧကဘုနျးမွတျကတော့ အနုပညာသှေးအပွညျ့ပါတာကွောငျ့ ဖဖေမေငျးမျောကှနျးတို့ဖြျောဖွနေတောလေးကို ကလနျ့ကာနောကျကှယျမှာ ထိုငျပွီး စိတျပါဝငျစားစှာ ‌အားပေးကွညျ့ရှု့နတေဲ့ပုံရိပျလေးကို ပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
အပူချိန် (၄) ဒီဂရီ ထပ်တိုးလာသည်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တမြို့လုံးရေအောက်သို့ ရောက်သွားမည်
ဝါကျွတ်မှာ ချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲတော့မယ့် ချစ်စနိုးဦး
Egypt International 2019 ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုကြီးကို ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ေ ဆာင်သက်ထားသူဇာ
သူမရဲ့Relationship ဒီမှာပဲ ပြီးသွားပြီလို့ တရားဝင်ေ ကြငြာလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ကျုပ်တို့လည်း ကိုယ့်မိဘကိုယ်သီတင်းကျွတ်မှာ ပြန်ကန်တော့ချင်တာပေါ့ဗျာ…။ဒါပေမယ်….
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ချန်ပီယံကြီး အောင်လရဲ့ တံတောင် အစွမ်းဖြင့် အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို ထပ်ပြီးကြည့်ခြင်တဲ့ သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်
လပြည့်ညမှာ ဘရန်ဒန်ဗဲရာ ကိုအနိုင်ထိုးပြီးအောင်ပွဲခံလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ကဏ္ဍများ Select Category Celebrity food Health Knowledge Uncategorized ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ အားကစား အနုပညာ ရပ်ဝန်း ဗေဒင်၊ယတြာ ကြားသိရသမျှ
မြန်မာဇုန် မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတစ်ချို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ သတင်း နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို လူအများကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဇုန်က ရေးသားဖော်ပြတဲ့ သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေ မှတစ်ပါး အခြားသတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံများဟာ သက်ဆိုင်သူများရဲ့ မူပိုင်သာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
copyright @ apyolay